CDC ၏အစီရင်ခံစာများအရ Delta variant သည်အမေရိကန် coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်၏ ၈၃% ကိုပြသသည်။ ယခုအခါရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ်၏ ၈၃% ရှိသည်။ တချိန်တည်းမှာပဲရီပတ်ဘလီကန်တွေတိုးလာတဲ့အရေအတွက်ကသူတို့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကိုသူတို့ရိုက်ချက်တွေရဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ CBS News သတင်းထောက် Laura Podesta သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် CBSN AM နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ CBSN သည် CBS News ၏ ၂၄/၇ ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုက်ရိုက်လွှင့်သတင်း ၀ န်ဆောင်မှုပါ ၀ င်သောပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်အခမဲ့ရနိုင်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့သော ၀ န်ဆောင်မှုသည် CBS News သတင်းထောက်များနှင့်သတင်းထောက်များ၏နက်ရှိုင်းသောခုံတန်းလျားမှသတင်းနှင့်မူရင်းပုံပြင်ပြောခြင်းအတွက်ထိပ်တန်းနေရာဖြစ်သည်။ CBSN သည်တစ်နေ့တာ၏ထိပ်တန်းပုံပြင်များနှင့်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာရင်ဆိုင်နေရသောအဓိကကိစ္စရပ်များသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းငုပ်လျှိုးနေသည်။ CBSN သည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအဓိကစျေးကွက်များတွင်ပြည်တွင်းသတင်းလွှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်လည်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ CBSN ကိုလက်ရှိ CBSNews.com နှင့် CBS News အက်ပလီကေးရှင်း ၂၀ ကျော်နှင့် Paramount+ subscription ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရနိုင်သည်။ CBS News YouTube channel မှ http://youtube.com/cbsnews သို့စာရင်းပေးသွင်းပါ CBSN ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ပါ - http://cbsn.ws/1PlLpZ7c CBS News အက်ပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပါ။ http://cbsn.ws/1Xb1WC8 Instagram တွင် CBS News ကိုလိုက်နာပါ။ https://www.instagram.com/cbsnews/ Facebook တွင် CBS News ကဲ့သို့ http://facebook.com/cbsnews http://twitter.com/cbsnews တွင် Twitter ရှိ CBS News ကိုလိုက်နာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာများကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ http://cbsn.ws/1RqHw7T Paramount+ အခမဲ့စမ်းကြည့်ပါ - https://bit.ly/2OiW1kZ ဗွီဒီယိုလိုင်စင်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအတွက် licensing@veritone.com သို့ဆက်သွယ်ပါ
CDC ၏အစီရင်ခံစာများအရ Delta variant သည်အမေရိကန် coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်၏ ၈၃% ကိုပြသသည်။ ယခုအခါရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ်၏ ၈၃% ရှိသည်။ တချိန်တည်းမှာပဲရီပတ်ဘလီကန်တွေတိုးလာတဲ့အရေအတွက်ကသူတို့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကိုသူတို့ရိုက်ချက်တွေရဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ CBS News သတင်းထောက် Laura Podesta သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် CBSN AM နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ CBSN သည် CBS News ၏ ၂၄/၇ ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုက်ရိုက်လွှင့်သတင်း ၀ န်ဆောင်မှုပါ ၀ င်သောပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်အခမဲ့ရနိုင်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့သော ၀ န်ဆောင်မှုသည် CBS News သတင်းထောက်များနှင့်သတင်းထောက်များ၏နက်ရှိုင်းသောခုံတန်းလျားမှသတင်းနှင့်မူရင်းပုံပြင်ပြောခြင်းအတွက်ထိပ်တန်းနေရာဖြစ်သည်။ CBSN သည်တစ်နေ့တာ၏ထိပ်တန်းပုံပြင်များနှင့်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာရင်ဆိုင်နေရသောအဓိကကိစ္စရပ်များသို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းငုပ်လျှိုးနေသည်။ CBSN သည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအဓိကစျေးကွက်များတွင်ပြည်တွင်းသတင်းလွှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်လည်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ CBSN ကိုလက်ရှိ CBSNews.com နှင့် CBS News အက်ပလီကေးရှင်း ၂၀ ကျော်နှင့် Paramount+ subscription ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ရနိုင်သည်။ CBS News YouTube channel မှ http://youtube.com/cbsnews သို့စာရင်းပေးသွင်းပါ CBSN ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ပါ - http://cbsn.ws/1PlLpZ7c CBS News အက်ပလီကေးရှင်းကို download လုပ်ပါ။ http://cbsn.ws/1Xb1WC8 Instagram တွင် CBS News ကိုလိုက်နာပါ။ https://www.instagram.com/cbsnews/ Facebook တွင် CBS News ကဲ့သို့ http://facebook.com/cbsnews http://twitter.com/cbsnews တွင် Twitter ရှိ CBS News ကိုလိုက်နာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာများကိုစာရင်းပေးသွင်းပါ http://cbsn.ws/1RqHw7T Paramount+ အခမဲ့စမ်းကြည့်ပါ - https://bit.ly/2OiW1kZ ဗွီဒီယိုလိုင်စင်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအတွက် [email protected] သို့ဆက်သွယ်ပါ
The Delta variant of COVID-19 is running rampant, especially through unvaccinated Americans, with the Centers for Disease Control and Prevention saying the variant now accounts for 83% of new cases. Meanwhile,agrowing number of Republicans are now urging their constituents to get their shots. CBS News correspondent Laura Podesta joins CBSN AM with more details.
Fears record COVID-19 deaths and infections could return to US | Coronavirus |9News Australia
สันธนะ มอบตัว อ้างถูกยัดข้อหาอุ้มรีดค่าไถ่ | 03-08-64 | ข่าวเย็นไทยรัฐ